Fanasiana kojakoja Aquarium ny trano Bakteria infrared lavitra
Ny bakteria infra red-infrared dia sivana bio vaovao izay afaka mamono ireo bakteria manimba ao anaty rano amin'ny alàlan'ny taratra taratra infrared kely. , nitrite, hidrogen sulfuret ary metaly mavesatra avy amin'ny rano. Ankoatr'izay, ny sivana dia manakana ny fitomboan'ny bobongolo sy ny ahidrano. Ny sivana koa dia manana fahaiza-mitroka azo tsapain-tanana azo tsapain-tanana miaraka amin'ny fanamafisana PH. Ny vokatra vaovao dia hipetraka eo ambonin'ny bio sivana.
Sivana sombin-keramika ho an'ny fanariana aluminium
Foam Ceramic dia ampiasaina amin'ny filtration ny alimo aluminium sy aliminioma amin'ny famonoana vy sy trano fanariana. Miaraka amin'ny fanoherana ny fikorontanan'ny hafanana mahery vaika sy ny fanoherana ny harafesina avy amin'ny aliminioma anidina, azon'izy ireo atao tsara ny manafoana ny fampidirana, mampihena ny entona voafandrika ary manome fikorianan'ny laminera, ary avy eo madio kokoa ny metaly voasivana. Ny metaly madio kokoa dia miteraka filalaovana kalitao avo lenta kokoa, tsy dia manala firaka ary tsy fahatomombanan'ireo lesoka tafiditra ao anatiny, izay mandray anjara amin'ny tombom-barotra farany ambany.
SIC Ceramic Foam sivana Ho an'ny filtration vy
Ny sivana SIC Ceramic Foam dia novolavolaina ho toy ny sivana vy an-idina vaovao hampihenana ny lesoka fanariana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Miaraka amin'ny mampiavaka azy maivana, mavesatra mekanika, faritra amboniny lehibe, poriazy avo, fanoherana fikorontanana mafana, fanalefahana fanoherana, fampisehoana avo lenta, sivana séramic ceramic foam dia natao ho an'ny sivana maloto avy amin'ny vy sy alika vy, vy natsipy vy , fanariana vy volondavenona sy fanariana mora volavolaina, fanariana varahina, sns.
Sivana vita amin'ny seramika vita amin'ny seramika ho an'ny indostrian'ny vy
Ny keramika vita amin'ny foam dia karazana keramika porous mitovy amin'ny volony amin'ny endriny, ary izy io dia taranaka fahatelo an'ny vokatra seramika porous dia novolavolaina taorian'ny seramika porous tsotra sy seramika porous tantely. Ity keramika teknolojia avo lenta ity dia misy pores telo-dimensional mifandray, ary ny endriny, ny haben'ny pore, ny permeabilité, ny velarantany sy ny fananana simika dia azo ahitsy tsara, ary ny vokatra dia toy ny "foam-be" na "sponjy porcelain". Amin'ny maha karazana fitaovana sivana tsy metaly vaovao azy, ny tombo-kase vita amin'ny seramika dia manana tombony amin'ny lanja maivana, tanjaka avo, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny harafesina, famerenana amin'ny laoniny tsotra, androm-piainana lava ary filtration sy adsorption tsara.
Zirconia seramika sombina sombin-javatra ho Casting filtration
Zirconia Ceramic Foam Filter dia teboka tsy misy phosphate, metling avo, miavaka amin'ny porosity avo sy fahamarinan-toerana mekanokimia ary fanoherana tsara ny fikorontanana mafana sy ny harafesin'ny vy vita amin'ny vy, afaka manala amin'ny fomba mandaitra ny fidirana ao anatiny, mampihena ny entona voafandrika ary manome fikorianan'ny laminara rehefa levona zieconia foam voasivana, namboarina tamin'ny fandeferana henjana mandritra ny famokarana, io fitambarana toetra ara-batana io sy ny fandeferana marina no mahatonga azy ireo ho safidy voalohany amin'ny vy anidina, vy vita amin'ny vy ary vy vy, sns.
Regenerative Thermal / Catalytic Oxidizer (RTO / RCO) dia ampiasaina hanapotehana ireo mpandrava rivotra miaro loza (HAP), Composite Organic (VOC) miovaova ary ny famoahana fofona manitra sns, izay ampiharina betsaka amin'ny sehatry ny fiara Automotive, indostria simika, fanamboarana elektrika & elektrika indostria, Fifandraisan'ny rafitra fandoroana, sns. Ceramic Honeycomb dia voatondro ho haino aman-jery fanavaozana voaorina an'ny RTO / RCO.
Seramika tantely tantely cordierite ho an'ny DOC
Ny landim-tantely ceramic (catalyst monolith) dia karazan-vokatra vita amin'ny ceramic indostrialy, toy ny mitondra catalyst izay be mpampiasa amin'ny rafitra fanadiovan-tsolika entona sy ny rafitra fitsaboana entona fandrehitra entona.
Takelaka seramika tsy misy tohotra ho an'ny BBQ
Fahatanjahana miavaka fanamiana mamaivay
Fanoherana fikorontanana hafanana tena tsara Mitsitsy hatramin'ny 30 ~ 50% vidin'ny angovo may tsy misy lelafo.
Akora tsara kalitao.
Ceramic Substrate / tantely amin'ny cordierite, alumina, mullite
Habe maro azo.
Ny haben'ny mahazatra anay dia 132 * 92 * 13mm Fa afaka mamokatra habe samihafa izahay arakaraka ny fatin'ny mpanjifa, fitsitsiana angovo tanteraka ary fandoroana mahomby.
Ceramic tantely DPF tantely
Ny sivana madiodio Cordierite Diesel (DPF)
Ny sivana mahazatra indrindra dia vita amin'ny cordierite. Ny sivana Cordierite dia manome fahombiazan'ny filtration tena tsara, somary
tsy lafo (ampitahaina amin'ny sivana mikoriana amin'ny rindrin'i Sis). Ny lesoka lehibe dia ny cordierite manana teboka miempo ambany.